Kutsetseka kwefonti uye qtgtkstyle Kuvhura 12.3 | Kubva kuLinux
Kutsvedza kwefonti uye qtgtkstyle Kuvhura 12.3
pandev92 | | Kugoverwa, GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Zvirokwazvo kupfuura munhu mumwechete akambosangana nazvo, kuti mu distros hapana dhiri, seyakajairika mutemo font kutsetseka haina kunaka, uchienzaniswa neUbuntu.
Opensuse yaive isiri iyo, saka ndakatanga kutsvaga zvishoma mhinduro yenyaya iyi, uye mushure memaawa anenge maviri ekutsvagisa ndakauya kuiwana.
Isu tinowedzera ichi chinyorwa kuburikidza neyast:
Ipapo isu tinoenda kune yast, isu tinotsvaga mune yast iyi repository uye isu tinoisa ese ayo mapakeji.
Zvekare tinoenda kune yast uye nekuisa fontconfig infinality.
Kamwe pasuru yacho yaiswa, isu tichaenda kugadzirisa infinality font kutsetseka, iyo nekumira inouya ne ubuntu mhando kutsetseka, izvo zvandisingade zvakanyanya. Saka iwe unovhura terminal uye nyora:
Mukati megwaro, tinotsvaga mutsara unoti "USE_STYLE = »UBUNTU»" Uye isu tinoshandura izwi ubuntu, kuenda "KUSHURE"Rangarira kuti iwe unogona zvakare kusarudza zvakatemwa windows 7, osx, chrome os nezvimwe."
Seye default font yeiyo system, ini ndakasarudza kuramba ndichishandisa gnome's cantarell, sezvo zvichinakidza kuverenga.
Isu tapedza, asi ikozvino tichaona kuti kana isu tavhura iyo qt kunyorera, haitore mhando yefonti yekusafa uye mamamenyu anoonekwa mune akakura kukura.
Saka isu tinonyora mune terminal
Zvino kana isu tanyatsoita, uye isu tichava nechitarisiko cherudzi urwu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Kutsvedza kwefonti uye qtgtkstyle Kuvhura 12.3
Ndakanganwa kuisa sosi:
Ini ndatoiwedzera kune iyo positi ..
Ini ndichave ndega ndisinganetseke nazvo?
Ini handinyatso cherekedza mutsauko, pamwe nekuti ini ndisinganyatsoona, zvinokosheswa zvakadaro.
albert ini akadaro
hazvindinetse. Asi mumamiriro api chaiwo kutsetseka kwefonti kwakakodzera?
Pindura albert ini
Ndiwo maonero eumwe neumwe, ndinoziva nezvevanhu kuti zvakashata uye zvakapoteredzwa masosi anotaridzika, ndipo pavanonyanya kuvafarira, asi mazhinji haadaro. Kutsetseka kwemavara, muzviitiko zvakawanda kunobatsira mukujeka kwekuverenga, uye zvakare chinhu cheziso, zvakafanana nekuona mukadzi asina makeup uye nekumuona akagadzirwa zvakanaka xD, anogara ari mukadzi, asi kazhinji mune yechipiri nyaya vanotaridzika nani ahhaaha.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu umo, zvisinganzwisisike, Ubuntu inoramba ichitora mukana wakasarudzika wezororo; Iwe unotarisa paWindows, unotarisa kuMacOS kana iwe unotarisa kuUbuntu uye zvakanaka kushandisa maawa mashoma pamberi pePC. Mamwe ma distros (anonditsanangurira) akanaka kwazvo…. asi iwe unofanirwa kushandira irwo rudzi rwechinhu uye dzimwe nguva haugamuchire zvaunoda: izvo zvinhu, mifananidzo uye mafonti anotaridzika zvakanaka ... uye pane akanaka masikirini, akanaka uye akanyatsotsanangurwa.
Ini ndinofanira kukuudza kuti ndinowirirana newe, nekuti nguva zhinji iyo eyeCandy chinhu chinotariswa uye kwete mhando yesoftware yaigadzirwa nayo (ndinobvuma kuti Ubuntu yakanaka pakukwezva vashandisi vatsva, asi inofanirwa kuvarima kuitira kuti vazive mashandisiro epuratifomu zvirinani kuitira kuti uvandudze mhando ye distro).
Zvisinei, ini ndichiri kufara nerubatsiro rweUbuntu rwunounza mukuunza vashandisi vatsva munharaunda yeGNU / Linux, sezvo mamwe ma distros vaida kuita zvakafanana, asi vasingakwanise nekuda kwemafungiro avo (ivo vanotopa pfungwa yekuve mukati medunhu reva fanboys ).
Nice tuto, asi kutaura chokwadi, kutsetseka kweOpenSUSE hakusiyane zvakanyanya kana ichienzaniswa neDebian uye zvigadzirwa (yayo "ClearType" inopinza uye inoverengwa kupfuura M $'s ine Windows).
Kunze kwezvo, iwe wakautora kupi iwo Wallpaper? Inotaridzika zvakanaka.
eliotime3000, nekuti ini handina kubatwa kwekuti nharaunda yaive sei isati yaisa iko kutsetseka, asi uyai, aive makiromita, ezvaive nazvo mubuntu / kubuntu kana kunyange chakra, zvakajeka, yaive yakawanda kana zvishoma padanho rimwe chete remahwindo, asi kana iwe ukavhura iwo mapeji ewebhu ne firefox, iwe waigona kutaura kuti iwo anga asina kunyatso sununguka kutarisa.
Mari dzese dzakatorwa kubva konachan! 🙂
Zvakanaka, hazvina kunyatsojeka kwandiri, kana iwo maapplication asingatore kutsetseka kwefonti ari iwo qt kana asiri eQt, ndinofungidzira iwo ari asiri-qt, asi muchinyorwa chinotaura kuti iwo ndiwo maQT.
Ndinoda kuzviedza asi izvi zvinondikanda zvishoma kumashure, sezvo ini ndinoshandisa qtcurve ine smaragd, uye ndinonyatsoda maitirwo ayo, ikozvino kana ndikaisa kutsetseka ndinonzwisisa kuti ndinofanira kuve nemaapplication akati wandei ane adwaita theme kana imwe gtk nechisimba uye izvi ndizvo zvinoita kuti ndisave nechokwadi.
mune gnome shell, iwo asingatore iyo anti-aliasing, kana yaiswa, ndiyo qt, ndosaka iwe uchifanira kuita ese kuraira kwegconftool, kukwazisa.
Zvakanaka ndatenda pandev92, mhosva yangu handina kuona kuti yaive gnome shell (uye ndakaverenga chinyorwa chako gnome shell, hehe), ndinoshamisika kana ndichidzokera shure ndingazove nedambudziko rakafanana mu kde kuti gtk haibate yakatsetseka, inonakidza kwazvo thanks gracias
Kwete, zvinongoisa anti-aliasing kumashure, hapana dambudziko :), ndiko kuti, pasina anti-aliasing, mafonti ari mu kde anotaridzika zvakanyanya, saka ndinokuraira kuti ushandise.
Zvakanaka, hapana chinenge chichifanira kuishandisa ku kde kuti uone mutsauko, chero bedzi iwe uchikwanisa kudzokera kumashure.
Ndatenda chaizvo ndichaedza
Kuedza mushandisi wangu xD
Iwe wakanganwa kujekesa kuti ndeyeGnome, nekuti mu KDE font kutsetseka inogoneswa nekutadza.
Ndakaedza kde, uye masosi anotaridzika zvinotyisa, kana iwe ukatarisa kuchinyorwa kwandinowana icho, iwe uchaona kuti mukomana akashandisa kde ...
Mubvunzo wangu ndewokuti: kutsetseka kwefonti kunoenderana nei nerudzi rwemapakeji anoshandiswa nekuparadzira?
Kutenda repo ye openuse.
Uyezve tarisa iyo Infinality foramu, uko inotsanangura mamwe matanho ekumisikidza nenzira kwayo
KDE: unogamuchirwa kune semantic desktop (chikamu 5)